MOEA – Page9– Ministry Of Ethnic Affairs
Ministry of Ethnic Affairs brings
hope for peace to Myanmar's
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနသည် ဥပဒေအရအပ်နှင်းထားသည့် တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ကာ နိုင်ငံအဝန်း ဒေသအသီးသီးရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံး ဥပဒေနှင့်အညီ အခွင့်အရေးများကို ရရှိခံစားနိုင်စေရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝများမြင့်မားလာစေရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းရင်းသားများ၏ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် တိုးတက်ခိုင်မာစေပြီး တိုင်းရင်းသားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ မြင့်မား တိုးတက်စေရန်
တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးနေသည့် ဒေသများရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစဉ်တစိုက် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည် …….
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် ယင်းတို့၏ ဒေသများတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည့်ကဏ္ဍစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ဘက်ပေါင်းစုံမှ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် …….
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်၊ အခြေခံအဆောက်အဦများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဌာန၏ သတင်းအချက်အလက်များ ထိရောက်စွာ မျှဝေဖြန့်ချိနိုင်ရေးတို့ကို ဦးတည် …..
February 24, 2020	News	0 Comments
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ရပ်ရွာအခြေပြု သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလိုအပ်ချက်တို့ကို ဆန်းစစ်စီမံခြင်း အစီအစဉ် ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပ
February 20, 2020	News	0 Comments
တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာများ ဟောပြောခြင်းနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြု သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ထန်တလန်မြို့တွင် ဆောင်ရွက်
ကချင်လူမျိုးများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ အာသံပြည်နယ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ…
ကရင်လူမျိုးများသည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသ၏ ကုန်းမြေဒေသရှိ မွန်ဂိုလွိုက်မျိုးနွယ်စုများမှ ဆင်း သက်လာပုံရသည်။
ဗမာလူမျိုးတို့သည် တိဗက်-ဗမာ (Tibeto-Burma) အနွယ်ဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း …
ရခိုင်လူမျိုးတို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အများစု နေထိုင်ကြပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး …
ကယားလူမျိုးများသည် တောင်ဖက်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဖက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ အနောက်…
ချင်းလူမျိုးများသည် တိဗက်-မြန်မာ (Tibeto-Burma) အနွယ်ဝင် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက် …
မွန်လူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော မျိုးနွယ်စုများအနက် အစောဆုံး အခြေချ …
ရှမ်းလူမျိုးများသည် တိုင်-ကတိုင်မျိုးနွယ်စုများမှ ဆင်းသက်လာသော မျိုးနွယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရှမ်းကုန်းမြေမြင့် …
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကိုယ်စားလှယ်များ၏ နေပြည်တော် လေ့လာရေးခရီးစဉ်လာရောက်မှု (၁၄-၈-၂၀၁၉ မှ ၁၈-၂-၂၀၁၉)
ကယားပြည်နယ် ရုံးအဆောက်အအုံသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
Ministry of Ethnic Affairs., Ministry Zone, Naypyidaw Union Territory
www.moea.gov.mm (beta) တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုလိုသည်များရှိပါက wpreviewer.moea@gmail.com သို့ mail ဖြင့် ဖြစ်စေ ဖုန်း ၀၆၇၃၄၀၉၅၀၄ သို့ ရုံးချိန်အတွင်းဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Total Website Visits: 36114
Developed by MMcities(MMUA)